WAXAAD BARATAY WAA BAASKAA
Carabtu markey akaan qof buufis qaba ama soo waalan raba , waxey yiraahdaan "TA'AKHARA CANHU AZZAWAAJ".
Inta aanan u galin macnaha kalmadda dusha ku qoran oo aan hoos ku sharaxi doono, bal marka hore qisadan ila eega. Nin baa waxa uu halheys ka dhigtay kalmadda ah C/laahi Yuusuf baa ka dambeeya. markii wax la weydiiyaba wuxuu ku jawaabaa kalmaddaa iyada ah. maalin ayaa ninkaa xaaskiisii xanuunsatay markaasuu dhakhtarka ula cararay, markii la baaray xanuunkeedii ayaa dhakhtarkii ku yiri ninkii "Aw-guuriyo xaaskaaga uur bey leedahay", ileyn waa nin ay meel kaga dhagan tahaye, isagoo aan hubsan waxa dhakhtarku sheegayo ayuu yiri, " C/laahi Yuusuf baa ka dambeeya". Dhakhtarkii oo naxdin afka kala qaadi la' ayaa ku yiri ninkii " ama C/laahi Yuusuf haka dambeeyo ama cifriide, xaaskaadu waa calool weyn tahay".
Waxaan sheekadaa soo xasuustaa markaan arko maqaalo dad ku soo qoraan bogga somalitalk, dadkaa iyaga ah waxey caado ka dhigteen in hal mowduuc ay maalin walba ku celceliyaan iyagoon wax barnaamij ah ama qoraal dadka wax taraya aan iskuba howlin taasoo ay adduun iyo aakhirana ku seegeen.
Dadkaa waxaa kamid ah nin magiciisa la yiraahdo C/waaxid laakiin anigu aan u baxshay Madaalaha, ma ahan madaalihii hobolada waaberi , ee waa mid aan ka dhicin, halkii uu Cumar Shooli heestii kedis jimce walba kaga celcelin jiray kan waqtigiisii oo dhan wuxuu u huray in uu C/laahi yuusuf ka sheekeeyo, waan garan waayay waxa uu uga jeedo arinkaa isaga ah siyaabo badan ayaan ku fasiray waxaan u kala garan waayay jaceyl iyo naceyb midka ay tahay, waxaanse u badshay xagga jaceylka in ay xigto oo uu C/laahi u qabo, maadaama cidda aad neceb tahay siyaasad ahaan la qariyo ama si maldahan loo sheego.
Markaan akhriyay maqaalo tiro badan oo uu madaaluhu qoray, waa kuwo dhaadheer laakiinse nuxur yar, marmarka qaarkoodna madaxa ku xanuujinaya markaad fahmi weydo meel ay u socdaan, kuwaasoo aan laheyn meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhamaadan.
waxaa maqaaladaa meel walba kaga jira magaca C/laahi Yuusuf, waxaad ku arkeysaa mowduuc inta la bilaabay oo aan la dhameys tirin ayaa hadana waxaa bilaabanayaa mid kale, markaasaa gabigaagaba jahwareer kugu dhacayaa. Sow ma habboona in marka hore tababar la qaato oo sida wax loo qoro la barto inta aan la isku dhibin in wax la qoro?. Wuxuuse kaga daray markii uu iska dhaadhiciyay in si siyaasad ah wax u qoro, war illeyn balo!!!!.
waxaase wax walba isku fuuqsaday ileyn indho adeyg looma dhintee, qof baase xishooda oo wuxuusan aqoon u laheyn ka gabada, maqaalkii ugu dambeeyay ee uu qoro ayuu madaaluhu ku sheegay hadalkii Jamaal Cabdi Naasir oo Masar xukumi jiray, in uu yiri Anwara Sadat oo isna Masar madax ka noqday. Halkaa waxaad ka garaneysaa in arintu tahay laguma dhaamee dhaqaaq, wax qor intaad kari karto adoon eegin kana baaraan degin waxa aad qoreyso iyo mowduuca aad ka hadleyso intaba.
Akhriste, haddaan u soo noqdo muwduuceyga maanta oo ku saabasanaan doona talo aan u soo jeedinayo ninkaa isaga ah, ileyn haddii aad aragto qof jihadu ka lunsan tahay, waxna isaga qasan yihiin, waxaa habboon in aad ku toosiso wadada saxda ah haddii aad kari karto.
sideynu la wada socono dadyowga carabta ah ayaa la sheegaa in ay yihiin dad aad guurka u jecel , haddii ay arkaan nin waalan ama mid soo wada ama mid aan waxba laga qorin, waxey yiraahdaan war kaas iska daaya, ta'akhara canhu azzawaaj. oo macnaheedu yahay guurkii baa ka soo daahay, xitaa haddii qofku siyaabo kale u waasho iyaga xaggooda waa u arrin guurka ah. halkaa waxaa ka cad in haddii uu guurku kaa soo daaho aad marmarka qaarkood ku sigato in aad dharka xoorto. ma ahan carab keliya dadyowga guurka aadka u qiimeeya ee waa dunida oo idil soomaaliduna waa kamid oo waxeyba yiraahdaan ninkaan guursan oo doobnimo ku gabooba waa naaqis, macnuhu waa qof aan dhameystirneyn halka dadku qaar ku duceysan jireen markaan Muqdisho joogay ilaahoow anoo aan aabbe la i oran taree-disho ha i geyn, (waa qabuurihii km 13). dumarkuna waaba isku caayaan "naa naga tag guumeys yahay"
waxaan hadalkaa uga gol-leeyahay, anigu ma ahi nin aqoon u leh C/waaxid laakiin nin isaga garanaya oo maalin sii horeysay maqaal ku soo qoray isla somalitalk waxa uu ka shanqariyay in C/waaxid uu yara doobnimo ku gaboobay, xagga horumarka iyo shaqadana looga fiican yahay marka anigoo taa ka duulaya haddii ay run tahay una caqli celinaya C/waaxid waxaan leeyahay Dantaada garo, C/laahi Yuusuf dantiisa iyo hadafkiisa waa yaqaane, yuusan waqtigu ku seegin oo soomaalidan caalamka soo gashay oo qofba dhinac ka galay wax la qeybso intaad C/laahi Yuusuf oo aan kuba garaneyn in aad jirto iyo in kale aad waqtigaaga ku baabi'in laheyd.
waxaan hadalkeyga ku soo gabagabeynayaa waanadaa iyada ah wax ku qaado, haddii kale wacade waxaa xigta C/laahi Yuusuf baa ka dambeeya ileyn waxaad baratay waa baaskaaye, ama waxey arintu kusoo biyo shubmi ta'akhara canhu azzawaaj
QORAALADII HORE EE FAARAX WARSAME